Bilaogy teknolojia 10 tsy fantatrao momba | Martech Zone
Alatsinainy Janoary 25, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Zava-dehibe ny bilaogy teknolojia Martech Zone. Rehefa manoratra momba ny fiantraikan'ny haitao manokana amin'ny marketing aho dia matetika no mitarika ny bilaogin'ny teknolojia. Matetika izy ireo dia manao asa lehibe amin'ny fandrakofana ny vaovao sy ny hevitra momba ny teknolojia, saingy tsy mahita ny fampiharana ara-barotra azo ampiharina ao.
Ireo zazalahy lehibe dia manandrana mitady ny vaovao farany lehibe indrindra, ny resadresaka farany indrindra, na ny manandrana manipy anaram-boninahitra sasany mahasarika ny sain'ny rehetra. Betsaka kokoa ny zava-mitranga amin'ny Teknolojia tokony ho fantatrao. Ireo olona ireo dia eo amboniny foana!
Ireto misy bilaogy teknolojia 10 tsy fantatrao:
Inona no Noo - Patric dia namana tsara ary ny orinasany dia manabe ny 'tsy teknolojia'.
Fampihorohoroana - Jeff dia manana torohevitra lafo vidy ary mahatsikaiky foana ny fanoratany.
Ken McGuire - Ken manarona ny fanovan'ny teknolojia ny fiainantsika isan'andro.
Saingy zazavavy ianao - misy banga ny feon'ny vehivavy ao amin'ny habakabaka Tech. Mameno azy i Adria.
StarterTech - Manamora ny famakiana ny teknolojia ity bilaogy ity.
Bilaogin'ny lalàna momba ny teknolojia sy marketing - Eric dia manarona ireo raharaham-pitsarana rehetra izay misy fiatraikany amin'ny teknolojia sy ny mpivarotra.
Chip's Quips - Sakaiza efa ela an'i Martech Zone, Chip dia mametaka ny sasany amin'ireo vaovao tsara indrindra amin'ny Internet.
Fehezan-teny 2 na kely kokoa - Na dia fohy noho ny lahatsoratr'i Chip aza, ny namana Bill Dawson dia mitazona mialoha ny teknolojia ary manome famaritana pithy.
Voanjo hahazoana tombony - namana iray hafa ao amin'ny bilaogy, Thor Schrock dia manambatra ny teknolojia sy ny tombom-barotra ao amin'ny bilaoginy.
Isaky ny bilaogy teknolojia an'i Joe - ny namana tsara Jason Bean dia mahazatra ao amin'ny bilaogy Every Joe.
Indraindray ireo bilaogy dia tsy manana izany endrika sy fahatsapana izany - fa eo foana ny atiny! Ampio ireo bilaoginao ireo mpamaky bilaogy ireo ary matoky aho fa tsy ho diso fanantenana ianao.
Tags: fitazonana ny mpanjifadata ara-tsosialy
ChaCha Smarter noho Google?
29 Jan 2010 amin'ny 7:24 PM
Wow, misaotra, Doug! Voninahitra ho ahy ny tafiditra ao anaty lisitra aogositra toy izany - indrindra amin'ireo tiako toa an'i Jeff Atwood.